admin Aprili 20, 2022 0 Comment Imfundo yezondlo
Igama lam ndingu-Abby Zarate, kwaye ndiyiDyunivesithi yaseTexas yeSebe lezoNyango (UTMB) i-dietetic intern. Ndize kwiGalveston Country Food Bank ukuze ndijikelezise uluntu. Ukujikeleza kwam kwakukwiiveki ezine ngoMatshi nangoAprili. Ngexesha lam ndiya kusebenza kwiinkqubo ezahlukeneyo zemfundo nezongezelelweyo. Ndasebenzisa ikharityhulamu esekelwe kubungqina njengeMbala Me Healthy, i-Organise Guys, kunye ne-MyPlate My Family ye-SNAP-ED, iiprojekthi ze-Farmers Market kunye ne-Corner Store. Enye iprojekthi endisebenze kuyo yayiyiNkqubo yeNkxaso yeZondlo yaseKhaya neyayixhaswa liNyathelo lesiBonelelo esiPhezulu seNdlala. I-Color Me Healthy yayisetyenziselwa abantwana aba-4 ukuya ku-5. Ikharityhulamu esekelwe kubungqina igxile ekufundiseni abantwana ngeziqhamo, imifuno, kunye nokusebenza komzimba ngombala, umculo, kunye ne-5 yeemvakalelo. I-MyPlate yoSapho lwam yayisetyenziselwa ukupheka imiboniso yabantu abadala kunye nabantwana besikolo esiphakathi. Isifundo ngasinye saboniswa ngeresiphi ehambelanayo.
Ngelixa sisebenza kwiprojekthi yevenkile yekona, kwafuneka sisebenze nevenkile eGalveston Island ukomeleza iinketho ezisempilweni kwivenkile yabo. Umphathi wevenkile wayevuyiswa kukuba singene kwaye sincede ekuboneleleni ngeendlela ezinempilo kunye nokumfundisa. Ukunceda ukufundisa yena kunye nabanye abanini beevenkile, ndenze isikhokelo sokubafundisa ukuba bajonge ntoni ekutyeni okunempilo, indlela yokwandisa umbutho wabo wevenkile, kwaye zeziphi iinkqubo zomdibaniso abanokwamkela ngemigangatho ethile.
Kwezi veki zine, ndifunde okuninzi malunga nendlela i-GCFB enxibelelana ngayo noluntu oluyingqongileyo kunye nesixa somzamo owenziweyo wokubonelela ngeendlela ezinempilo kunye nemfundo yesondlo.
Kwiiveki zam ezimbalwa zokuqala, ndandidla ngokuqwalasela kwaye ndincedise ngemfundo yezondlo kunye neeklasi zokupheka. Ndingadala amakhadi eresiphi, iilebhile zeenyaniso zesondlo, kwaye ndakhe imisebenzi yeeklasi. Emva kwexesha ekujikelezweni kwam, ndiye ndanceda ukwenza iividiyo zeresiphi. Kwakhona, ndizihlelele ijelo le-YouTube le-GCFB. Ngalo lonke ixesha lam, ndenze i-handouts ngeenjongo zemfundo.
Xa ndisebenza kwiNkqubo yeNdlala enkulu, ndavavanya iibhokisi ezilungiselelwe ngokwezonyango kunye no-Ale Nutrition Educator, MS. Oku kwakubangel’ umdla ukubona indlela ababezakha ngayo iibhokisi ngokusekelwe kukutya okuqhelekileyo kunye nokutya okuodolwe ngokukhethekileyo. Ngaphaya koko, sithelekise amaxabiso esondlo esicetyiswayo kwimeko yesifo sesondlo.
Kwiveki yam yesithathu, kwafuneka ndenze umsebenzi wabazali kwiklasi yethu yangokuhlwa. Ndenze umdlalo we-MyPlate-themed Scattergories. Kule veki ndiye ndakwazi ukuya eGalveston's Own Farmers Market kunye nebhanki yokutya. Sibonise iindlela zokhuseleko lokutya kunye nezakhono zeemela. Iresiphi yeveki 'ye-garlic shrimp inyakazisa fry.' Uninzi lwemifuno eyayisetyenziswa esityeni yayivela kwimarike yomfama ngaloo mini. Saba nentlanganiso kunye noSeeding Galveston kwaye sabona umbono wabo wekamva kunye nendlela abafuna ngayo ukubandakanyeka ngakumbi kuluntu. Inkqubo yabo ibonelela ngemifuno emangalisayo kunye nezityalo ukuba abantu bathenge ngeveki. Mna nabanye abafundi be-UTMB sakwazi ukuya kwiklasi yokupheka yaseKorea. Esi siganeko sasimangalisa kwaye savula amehlo am kwi-cuisine yaseKorea kunye nenkcubeko.
Kwiveki yam yokugqibela, ndiye ndakhokela iklasi kwisikolo samabanga aphantsi. Ukufundisa iklasi ndasebenzisa ikharityhulamu esekelwe kubungqina Organwise Guys. I-Organwise Guys igxile kubantwana besikolo samabanga aphantsi kwaye ibafundisa ukuba batye ukutya okunempilo, ukusela amanzi kunye nokuzilolonga. Le nkqubo ibonisa ukuba onke amalungu emizimbeni yethu asinceda njani ukuba sihlale sisempilweni kwaye sisebenza, kwaye singawagcina esempilweni. Ndifundise kwiveki yokuqala, kule veki igxile ekufundeni ngamalungu omzimba kunye nendlela anegalelo ngayo emzimbeni. Umsebenzi endawudalayo yayikukuba abantwana bakhethe ilungu abalithandayo kubafana be-Organwise. Emva kokuba bekhethe ilungu abalithandayo, kwakufuneka babhale inyani enomdla kunye nento entsha abayifundileyo malunga nelungu. Okulandelayo, kufuneka babelane eklasini ngolwazi lwabo lwe-Organwise Guy baze bagoduke nalo ukuze baxelele abazali babo.
Lilonke, abasebenzi bezondlo basebenza nzima kakhulu ukwenza impilo esempilweni ibe mnandi kwaye yonwabe ngeendlela ezahlukeneyo. Kube luvuyo kunye nolonwabo ukusebenza neqela elimangalisayo elikhathalela uluntu lwaseGalveston County.
egqithileyo ngeposi Previous: Iblogi yeDietetic Intern
Igama lam ndinguTrang Nguyen kwaye ndingu-UTMB i-dietetic intern ejikeleza kuKutya kweGalveston County ...